नेपालका कुन ‘पाँच तारे’ होटेलमा एक रात बस्न कति खर्च लाग्छ ? « Clickmandu
नेपालका कुन ‘पाँच तारे’ होटेलमा एक रात बस्न कति खर्च लाग्छ ?
प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ११:२८
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा पाँच तारे होटेल खोल्ने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । ठूला व्यावसायिक घरानाहरु पनि होटेल खोल्न आकर्षित भएका छन् ।
होटेल व्यवसाय ग्ल्यामर भएकाले व्यवसायीहरु आकर्षित हुने गरेको निर्माणधीन म्यारियट होटेलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति बिनोद चौधरीले पनि पछिल्लो समय होटेलमा लगानी बढाइरहेका छन् ।
तारे होटेलमा खोल्ने विषय त शानको विषय हो भने त्यहाँ बस्नु त झन शानको विषय हो । किनभने सुविधासम्पन्न होटेलमा बस्न पनि निकै खर्च लाग्छ ।
नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये धेरै खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको बसाई प्रायः पाँच तारे होटेलमै हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालीहरु पनि कार्यक्रमहरु पाँच तारे होटेलमा बढी गर्ने गरेका छन् । सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटलमा एक रातको कति मूल्य पर्छ भन्ने चासो सबैमा हुने गरेको छ । हाल नेपालमा १० वटा पाँच तारे होटल रहेको भएपनि दुईवटा बन्द अवस्थामा छन् ।